Ukufezekiswa kweMveliso, Ukuqokelela ulwazi, Isikhokelo sentengiso -Yino
Ke kutheni i-YINO INTERNATIONAL CO., LTD
Iimveliso ezizodwa, sinokubonelela ngeesampuli ukuze uqinisekise
Ukuba uthenga iimveliso zobungcali ezinje ngomatshini siya kufumana izinto ezizodwa ezivela kwezi ndawo ukwenza iQC
Iwaranti ebalaseleyo kwiKlasi
Emva kokufumana imvume yomthengi siya kufaka iodolo kubathengisi abasebenzisa ileta yenkampani yethu, kwaye sijonge ikhontrakthi ngononophelo ukuqinisekisa ukuba ichanekile.
Ukuthelekisa umgangatho kunye nexabiso, ukhetha ababoneleli ngokulula nangokukhawuleza, kwaye ugcine ixesha lakho elixabisekileyo.
YINO INTERNATIONAL CO., LTD yinkampani yobungcali kumazwe angaphezulu kweminyaka eli-16 yamava. Iofisi yethu ebekwe kwi-YIWU CITY kwiphondo laseZheJiang, yenye yezona zixeko zibalulekileyo zokuthumela ngaphandle e-China. Abathengi bethu abavela eYurophu, eMelika, eMzantsi Melika, eAfrika nakwamanye amazwe ehlabathi.
I-100% yeCotton ithawula enemigca ethambileyo
12 Umbala Pen Cwangcisa 0.5 Gel Pen
5 ngo-1Family Fitness Exercise Izixhobo Wheel R ...
I-Pet Chew Toys Squeaky Inkukhu yenja
Degree Ifanitshala Foot Stainless Stainless A ...
I-Artificial Flower Garland Eucalyptus yoMhlobiso woMtshato
IKrisimesi Ukunitha iikawusi Ikhephu Elk Worst Stock ...
Matte lipstick isikwere Tube Tube Multicolo ...